Taratasin’i Jean Tsy vita intsony izany !
Dia ahoana rangahy ity ? Inona indray ity vaovao aelinao ity le ! Koa raha izany voalazanao izany anie izany no fehezina dia midika hoe tsy vita intsony izany ny fampandrosoana ry Jean ee ! Ka efa tsy ho vita 1 andro sy ao anatin’ny fotoana fohy dia rahoviana ary ?
Asa aloha izay sary ao an-dohanao rehefa miresaka fampandrosoana sy fandrosoana. Tsy miteraka fampandrosoana angaha moa, ohatra, ny fitadiavana vahaolana tsy hiakaran’ny vidin-tsolika sy ny saran-dalana ? Sa ilay fampihemorana ihany no vitanareo vetivety ? Inona izany ry Jean no ilingilinginareo eo amin’io toerana io rehefa tsy hampandroso a a ? Ny fampandrosoana anie asa mitohy ee ! Vita ny eo dia miditra indray ny manaraka fa tsy izany araka ny hieritreretanao azy izany. Ianao ity mantsy izany ry Jean dia tsy mahay afa-tsy ny manilika hadisoana amin’ny hafa sy miala bala foana aa ! Dia tokony ho gaga ve ianareo rehefa avy eo raha tsy averinay eo amin’io toerana io intsony ?